इन्द्रेणीबाट चर्चा कमाएकी चर्चित गायिका टिका सानुमाथी के भयो फेरी ? – Gazabkonews
इन्द्रेणीबाट चर्चा कमाएकी चर्चित गायिका टिका सानुमाथी के भयो फेरी ?
इन्द्रेणीबाट चर्चा कमाएकी चर्चित गायिका टिका सानुमाथी के भयो फेरी ? आखिर किन हुन्छ यि गायिकाको जीवनमा यस्तो ? यि दृश्यहरु टिकाको वास्तविक जीवनको नभई हालै सार्वजनिक नयाँ गीत बुहारीको एक दृश्य हो । हेर्नुहोस् भिडियो
रक्षा श्रेष्ठले जिग्रीलाई धोका दिएर अर्कैसँग विबाह गरेपछि यि सुन्दरीको प्रेममा छन् सक्किगोनीका जिग्री, जिग्रीकी नयाँ प्रेमीकाले अब सक्किगोनीमा नै काम गर्ने, यि सुन्दरी छिन् चल्तिका हिरोइन भन्दा पनि राम्री, एकसाथ मिडियामा आएर यि दुईले खोले प्रेममा डुबेपछिको पहिलो डेटिगंको रहस्य, हेर्नुहोस् भिडियो
मधुलाई विबाह गर्नुअघि यि युवतीसँग प्रेममा रहेछन् महानायक राजेश हमाल, प्रेममा रहेकी भनिएकी महिलाले खोलीन् सारा पोल, ति महिलाले रहस्य खोलेपछि राजेश पनि पहिलो पटक बोले, के भने राजेशले ? हेर्नुहोस् भिडियो
विबाह गरेको लामो समयपछि स्वस्तिमा र निश्चलले दिँदैछन् फ्यानलाई सप्राइज, के गर्भवती छिन् स्वस्तिमा ? प्रियंका, ऋचा, गरिमाहरुले बेबी बम्प देखाएका बेला स्वस्तिमा गरिन् यस्तो संकेत ? बाबु बन्न लागेकोमा यसरी खुशी ब्यक्त गरे निश्चलले, हेर्नुहोस् भिडियो
फेरि कुलमानकै चर्चा, प्राधिकरणमा उनको ‘पुनरागमन’ होला त ? लोडसेडिङको अन्त्य गरेर ‘स्यावासी’ पाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पुनः प्राधिकरणको प्रमुख भएर आउने चर्चा चल्न थालेको छ । चार वर्षे कार्य अवधि समाप्त भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई पुनः नियुक्त नगरेपछि प्राधिकरणबाट बिदा भएका कुलमान फेरी प्राधिकरणको प्रमुख भएर आउने चर्चा चल्न लागेको हो ।
कुलमानलाई तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले दाहाल नजिक भएकै कारण पुनः नियुक्ति नगरेको बताइन्छ । अहिले उनी अनुकुलको सरकार आएको र ऊर्जा मन्त्री पनि माओवादी केन्द्रले पाएकै कारण पुनः कुलमान नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख भएर आउने चर्चा चल्न थालेको हो ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । शाक्यलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने र उक्त पदमा कुलमानलाई ल्याउने तयारी भइरहेको ऊर्जा मान्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
तर, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले भने अहिलेसम्म कुलमानलाई ल्याउने वा नल्याउने भन्ने बारेमा सार्वजनिक रुपमा केही बोलेकी छैनन् । तर, मन्त्रलयले भने भित्र भित्र कुलमान ल्याउने तयारी गरिरहेको स्रोतको दावी छ । नेपाल विद्युत प्राधिकारणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राधिकरणबाट गत भदौको अन्तिम साता बाहिरिएसँगै लोडसेडिङ हुने हल्ला व्यापक रुपमा चल्यो । धेरैले कुलमान पुनः नियुक्त हुनका लागि दबाब स्वरुप उनैले नै यो हल्ला चलाएको आरोप समेत लगाए ।
छिनछिनमा बत्ती जाँदा बाघ कराएको र बाख्रो हराएको एकैपटक भएजस्तै आमनागरिकले लोडसेडिङ हुनै लागेको हो कि भन्ने आंशका पनि व्यक्त गरेका थिए ।
तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने त्यसलाई बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु संयोग मात्र हो भनेको थियो । तर, कुलमान आएपनि नआए पनि लोडसेडिङ भने हुने सम्भावना छैन् र हुँदैन पनि । विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशीबाट बिजुली उत्पादन हुन थालेको र त्यसले पनि नभ्याउने अवस्था आएमा भारतबाट बिजुली ल्याएर भएपनि लोडसेडिङ हुन नदिने बाचा आम नागरिकलाई दिँदै आएको छ ।
तर, यसरी बिजुली जादा पनि प्राधिकारणले भने त्यस्तो अवस्थालाई लोडसेडिङ भएको मान्न तयार देखिएको छैन् । प्राधिकरणले यसरी बिजुली जानुलाई ‘प्राविधिक कारण’ भन्दै आएको छ । मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको करिव पाँच वर्ष हुन लागेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले २०७३ को तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिनबाट परीक्षणका रूपमा काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका प्रमुख शहरलाई लोडसेडिङमुक्त गरेको थियो । त्यसैगरी, २०७४ को वैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रको पनि लोडसेडिङ हटेको थियो । त्यसअघि उक्त क्षेत्रमा दैनिक तीन घन्टासम्म लोडसेडिङ हुँदै आएको थियो ।
त्यसपछि लोडसेडिङको मार खेप्नु नपरेको विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ । करिव पाँच वर्षअघि अघि दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको थियो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान नियुक्ति भएपछि लोडसेडिङ सदाका लागि ‘वाइवाई’ गरेका थिए ।